ချယ်ဆီး မခေါ်ဘဲမနေနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရေးမှာ စကေးကြွယ်ပြခဲ့တဲ့ ရိုက်စ် – Myan Sports
ချယ်ဆီး မခေါ်ဘဲမနေနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရေးမှာ စကေးကြွယ်ပြခဲ့တဲ့ ရိုက်စ်
ဝက်စ်ဟမ်းကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ဒီကလန်ရိုက်စ်ဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမတိုင်မီ ချယ်ဆီးအသင်းနဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာ လေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း အမိုက်စားသွင်းဂိုးကို သွင်းယူပြခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ ချယ်ဆီးအကယ်ဒမီကနေ ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ ဒီကလန်ရိုက်စ်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝပွဲဦးထွက်ပွဲစဉ်ကို ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအချိန်ကစပြီး ဒီကလန်ရိုက်စ်ဟာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် သက်သေပြသနိုင်ခဲ့သလို အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာလည်း ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒီကလန်ရိုက်စ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ၁၃ ပွဲ ပါဝင်ကစားပေးထားပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ခံစစ်ကစားသမားတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလည်း သက်သေပြသထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလန်ရိုက်စ်ဟာ ၎င်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအရည်အသွေးနဲ့ ပွဲကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သလို တိုက်စစ်ထိ လိုက်ပါပြီး ဂိုးသွင်းယူဖို့ကိုလည်း တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိကြောင်း သောကြာနေ့နံနက်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ တစ်ဖက် ၂ ယောက် လေ့ကျင့်ရေး ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘောလုံးကို ညာခြေနဲ့ အသာကော်တင်ပြီး အသင်းဖော် ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲ ဘောလုံးကို မြေမကျဘော ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလန်ရိုက်စ်ရဲ့ သွင်းဂိုးဟာ ဘယ်လောက်အထိ အထင်ကြီးစရာကောင်းလဲဆိုတာကို အောက်မှာပါတဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ချယ်ဆီးအသင်းကတော့ သဘောကျပြီးရင်း ကျနေတော့မှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Declan Rice. That’s filthy, son. 🔥@_DeclanRice | @WestHam pic.twitter.com/l7qrmIgHcE
— thesportsman (@TheSportsman) December 18, 2020
Previous Article ‌ဒေါ့မွန်အတွက် ဂိုးသွင်းယူပေးပြီး အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်လာတဲ့ မိုကိုကို
Next Article ရွေးချယ်စရာတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ကိုင်က ယူနိုက်တက်ကိုပဲ ရွေးခဲ့တာဆိုတဲ့ ၀ိန်းရူနီ